Mahad Salaad "24 Saac oo uu Mursal go'doon ahaa kadib waan u boodnay" + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar Mahad Salaad “24 Saac oo uu Mursal go’doon ahaa kadib waan u...
Mahad Salaad “24 Saac oo uu Mursal go’doon ahaa kadib waan u boodnay” + Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online)-Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad iyo xildhibaano kale oo kamid ahaa xildhibaanadii mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo ayaa 24 saac kadib la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka gurigiisa oo ku yaala madaxtooyada lagu jaray dhagxaan badan, isaga oo sheegay inay ka boodeen dhagxaanta kadibna ay la kulmeen guddoomiyaha baarlamaanka.
Wuxuu Nasiib darro ku tilmaamay in guddoomiyaha baarlamaanka laga hor istaago inuu la kulmo xildhibaanada mucaaradka ah, taasina ay caqabad ku tahay hanaanka dowladnimo ee dalka.
“In ka badan 24 saacadood oo Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mohamed Mursal ku go’doonsanaa gurigiisa oo ku dhexyaala Madaxtooyada Soomaaliya ayay noo suurogashay inaan u tagno kadib markii aan ka boodnay biro lagu xiray guriga uu ka dhex deganyahay Madaxtooyada”
“Waa nasiib daro runtii in sidaas loola dhaqmo Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo ah shaqsiga labaad ee dalka. Waxaa ii muuqda ififaalo muujinaya in dalkaani god mugdi ah lagu ridayo. Dhamaan sharciyadii yaraa ee dalkaan la iskula hayayna laga tilaabsaday. Lkn waxaan cod dheer ku leenahay yeeli mayno mana yeeli doono caburin iyo cago juglayn. Soomaaliyana in xoog lagu maamulo ma suurogeli doonto inshaa’allaah” ayuu yiri Mahad Salaad.